कसरी फोकस लक र आईफोन क्यामेरा को स्वचालित एक्सपोजर आईफोन समाचार
कसरी फोकस र आईफोन क्यामेराको स्वत: एक्सपोजर लक गर्ने
आईफोन क्यामेरा विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय हो, जस्तो कि केही अध्ययनले भनेको छ, जस्तै गत जनवरीमा आईफोन camera क्यामेरा निक्लनलाई फ्लिकर, फोटोग्राफी सेवा, मा लोकप्रियतामा लोकप्रिय छ भन्ने दावी गरिएको थियो। यो सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो किनकि यो सबै को एक भन्दा राम्रो हो, होईन। को आईफोन क्यामेरा सँधै प्रयोगकर्ताहरूद्वारा रुचाइएको छ किनकि यसलाई प्रयोग गर्न कत्ति सजिलो छ र किनकि यो एकदम बहुमुखी क्यामेरा हो यसले हामीलाई कुनै पनि परिस्थितिमा फोटोग्राफीको बारेमा केही पनि थाहा बिना राम्रो शटहरू लिन अनुमति दिन्छ।
तैपनि, त्यहाँ केहि समायोजन अझै छ जुन हामी भाग्न सक्दछौं, जस्तो कि मामलामा छ स्वत: फोकस र जोखिम लक। कहिलेकाँही हामी प्राथमिकता लिन सक्दछौं कि आईफोनले आफु आफैले निर्णय नगरेको कुन पोइन्टमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र कति प्रकाश स collect्कलन गर्ने। उदाहरण को लागी, एक समूह फोटो जुन कि धेरै टाढा लिइएको छैन र जहाँ समूहले सर्न रोक्दैन। यो सम्भव छ कि त्यो अवस्थामा आईफोन कहाँ ध्यान केन्द्रित गर्ने थाहा छैन, त्यसैले हामी आफैले यसलाई संकेत गर्नु पर्छ। यो एक साधारण प्रक्रिया हो, जसरी तपाईं तल देख्न सक्नुहुन्छ।
यसको लागि हामीले AE (अ ,्ग्रेजी, स्वचालित एक्सपोजर) र AF (अंग्रेजी, स्वचालित फोकस) रोक्नु पर्छ। AE समायोजित सेन्सरमा प्रवेश गर्ने प्रकाशको मात्रा र वायु सेना केवल फिक्सट गर्नका लागि आफैले निर्धारण गर्न फोकस रोक्दछ। दुबै कारकहरू एकै समयमा अवरुद्ध छन् र यसको लागि हामीले मात्र गर्नुपर्नेछ बिन्दु छनौट गर्नुहोस् जहाँ हामी प्रकाश / ध्यान स collect्कलन गर्न चाहन्छौं र एक सेकेन्ड भन्दा बढीको लागि थिच्नुहोस्। हामी देख्नेछौं कि वर्गले दुईवटा जम्प र ब्यानर बनाउँछ AE / AF लक
जब लक पहिले नै सञ्चालनमा छ, यो सर्ने छैन यदि हामी आईफोन सार्न पनि। वर्गको दायाँ पट्टि हामीaदेख्नेछौं आईएसओ परिमार्जन गर्न सूर्यको साथ ठाडो लाइन, जुन हाम्रो क्यामेराले तस्विर लिनको लागि प्रकाशको मात्रा चाहिन्छ। यो मान परिमार्जन गर्न, केवल एक औंलालाई माथि वा तल आईफोन स्क्रिनमा स्लाइड गर्नुहोस् (यो सूर्य आइकनमा हुनु हुँदैन)।
मलाई थाहा छ कि तपाईं धेरैलाई यो चाल थाहा थियो, तर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यसलाई थाँहा पाउँदैनन् र ती प्रयोगकर्ताहरूलाई यो सानो आज्ञा गरिएको छ। टिप र जसको म आशा गर्छु सेवा र सहायता गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी फोकस र आईफोन क्यामेराको स्वत: एक्सपोजर लक गर्ने
"मलाई थाहा छ कि तपाईं धेरैलाई यो चाल थाहा थियो, तर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यो थाँहा पाउँदैनन् र ती प्रयोगकर्ताहरूलाई यो सानो टिप निर्देशित गरिएको छ र जसलाई म आशा गर्दछु कि यसले सेवा र मद्दत गरेको छ।"
ठ्याक्कै, धेरै जसलाई मलाई समावेश गर्नेहरू यो थाँहा जान्दछन्, र पक्कै 99%% जसले आईफोन प्रयोग गर्दछ, वा हामी मध्ये कम्तिमा आईफोन क्यामेरा धेरै प्रयोग गर्दछौं, हामी जान्दछौं तर सम्पूर्ण पोष्टको लागि त्यस्तै आवश्यक पर्दैन। शीर्षक, त्यो शीर्षक उत्तर हुनेछ: तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ जहाँ क्षेत्र छोड्ने; र यो भन्नुबाट सुरु गर्नुपर्दैन कि आईफोन क्यामेरा संसारमा सब भन्दा लोकप्रिय हो ... राम्रो, यसको लागि हामीले केहि थप सुझावहरू जम्मा गर्यौं।
जावि पेरेज भन्यो
धेरै उपयोगी। मलाई कुनै विचार थिएन !!! Merci !!!
Xavi Perez लाई जवाफ दिनुहोस्
जेरार्डो टीडी भन्यो
Para अनुच्छेद !!! किन उनीहरूले यसलाई लामो बनाए?!?!? केवल कुरा मात्र कोठामा एक रेखा मा छ।
Gerardo TD लाई जवाफ दिनुहोस्
विन्डोज १०, माईक्रोसफ्टको नयाँ अपरेटिंग प्रणाली
आईकेईए स्टोर, एक अनुप्रयोग जुन आउन धेरै लामो समय लाग्यो